Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay xariga Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay xariga Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur
MUQDISHO – Wasiirka Amniga gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ducaale Islow ayaa ka hadlay xariga ay dowladu u geysatay Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Ciidamada ammaanka ayaa habeenimadii xalay weerar ku qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur si ay usoo qabtaan balse waxaa howlgalkaas ku geeriyooday shan askeri oo kamid ah Ilaalada guriga.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xabsiga la dhigay isaga oo dhaawac ka ah gacanta bidix,sida uu warbaahinta u sheegay Xildhibaan ku sugnaa guriga howlgalku ka dhacay.
Wasiirka Amniga gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ducaale Islow iyo Xeer ilaaliyaha guud oo shir saxaafadeed ku qabtay Taliska booliska Soomaaliya ,ayaa ka hadlay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Dowladda Federaalka Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la qabey oo la xiray kadib markii lagu tuhmay in uu gacmaha kula jirey arrimo lagu duminaayo qaranka looguna adeegayo dalal shisheeye.
Ma jirto cid sharciga ka sareyn karta, Cabdiraxmaan waxa uu heli doonaa Caddaalad, laakiin cid danbe oo looga haybsadeynayo sareynta sharciga ma jiri doono ayuu u yiri si hanjabaad leh.
Xeer Ilaaliya Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in baaritaan ku socdo kaddibna loo gudbin doono Maxkamadda ku shuqulka leh.
Wasiirka Amniga gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ducaale Islow oo isna dhankiisa Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in aan shir danbe oo fasax loo haysan lagu qaban karin Hoteelada magaalada Muqdisho.
Waan ku celineynaa shir danbe oo aan fasax laga haysan Wasaaradda Amniga iyo gobolka Benaadir laguma qaban doono Hoteelada iyo goobaha kale ee shirarka lagu qabto…”ayuu yiri Islow.
Xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dilkii ilaaladiisa waxaa kacsan xaaladda magaalada Muqdisho,iyadoona waddooyinka lagu arkayo ciidamo badan .